होम आइ'सोलेसनमा बस्नु भएका सं'क्रमितहरुलाई डा. रवीन्द्र पाण्डे दिए कोरोना जित्ने यस्ता टिप्स -
Homeसमाचारहोम आइ’सोलेसनमा बस्नु भएका सं’क्रमितहरुलाई डा. रवीन्द्र पाण्डे दिए कोरोना जित्ने यस्ता टिप्स
April 30, 2021 admin समाचार 474
थर्ममिटरबाट तापक्रम नापिरह’नुहोला । ९८ – ९९ फरेनहा’इटसम्म व्यक्ति अनुसार नर्मल तापक्रम हो । १०० पुग्यो भने पारासिटामोल खानुहोला । शरीर दुखेमा / टाउको दुखेमा पनि पारासि’टामोल खान सकिन्छ ।
पल्स अक्सि’मिटरबाट अक्सिजनको स्तर नापिरहनुहोला । यदि ९४ भन्दा तल गयो भने घोप्टो परेर सुत्नुहोला । यस’लाई प्रोन पोजिसन भनिन्छ । पेटमा वटा सिरानी, टाउकोमा एउटा सिरानी र खुट्टाको गोलिगाँठानेर एउटा सिरानी राखेर पेटको बलमा सुत्नु’होला । यसले फोक्सोको क्षमता बढाउछ । यसलाई प्राकृतिक भेन्टि’लेटर पनि भनिन्छ ।
भिटा’मिन सी २ पटक, जिंक २ पटक, भिटामिन डी हप्ताको १ पटक खानुहोला । आबश्यकता अनुसार पारासि’टामोल, कफ सिरप / ट्याब्लेट खान सकिन्छ ।
अक्सि’जनको मात्रा ९४ भन्दा कम भएमा, ज्वरो आइरहेमा वा खोकी लागिरहेमा, सास फेर्न गाह्रो भएमा वा अन्य गाह्रो भएमा घरमा नबस्नुहोला । यो नयाँ भेरिएन्टले अचान’क कोभिड निमोनिया गराउँछ । तसर्थ नजि’कको कोभिड अस्पतालमा गएर चिकित्सकसंग जांच गराउनुहोला । छातीको एक्स रे वा सिटि स्क्यान गरेर फोक्सोको अवस्था अनुसार चिकित्सकको सिफारिसमा औषधि ( एन्टिभाइरल / एन्टिबायोटिक ) खानु’पर्ने हुन्छ । कोभिड निमोनिया भएमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्छ ।
जांच नगरी घरमा अक्सि’जन दिएर नबस्नुहोला । अक्सिजनले रोग निको गर्दैन । चिकित्सकको सिफारिस अनुसारको औषधिले मात्र निमोनिया वा अन्य अवस्था ठिक हुन्छ । अक्सि’जन उपचार हैन । धेरै व्यक्तिले घरमै अक्सिजन दिएर फोक्सो ड्या’मेज भएको अवस्था पनि छ ।
एक रातमै अवस्था क्रिटि’कल हुनसक्छ । तसर्थ गाह्रो भएमा भोलि अस्पताल जान्छु नभन्नुहोला । अस्पता’ल प्याक भएपनि त्यहाँ तपाइंले कुनै न् कुनै उपचार पाउ’नुहुन्छ ।
अप्रमा’णित औषधि सेवन गरेर वा अन्य संक्रमितलाई निको भएको औषधि खाएर समय एबम स्वास्थ्य नष्ट नगर्नुहोला । प्रतिरोध क्षमता रातारात वृद्धि हुँदैन । यो लामो प्रक्रि’याबाट मात्र वृद्धि हुन्छ । मरिच, बेसार,अदुवा, ज्वानो, दालचिनी, तुलसी, गुर्जो, जेठिमधु, पिपला, कागतीको रस राखेको चिया पटक’पटक खानुहोला ।
घरमा एकज’ना संक्रमित भएमा सबैको परीक्षण गराउनुहोला । यसपटकको प्रजाति निकै संक्रा’मक छ । घरको खानाको अतिरिक्त फलफूल, दुध, गेडागुडी, अण्डा, सुप आदि प्रशस्त खा’नुहोला । पानीको बाफ लिंदा आराम हुन्छ ।
र’क्सी, चु’रोट तथा धेरै गु’लियो प’दार्थ / को’ल्ड ड्रिं’क्स से’वन नगर्नुहोला । हल्का ब्या’याम, पर्याप्त निद्रा तथा बिहान घाम ताप्ने गर्नुहोला । आफ्नो मानसिक अ’वस्थालाई सुदृढ एबम सबल राखुहोला । नआत्तिनुहोला ।
दिनमा १ /२ पटक मात्र स’माचार हेर्नुहोला । सामाजिक संजाल नहेर्नुहोला । अन’धिकृत समाचारले तनाव बढाउँछ । गाह्रो भएमा १०२ नम्बरमा फोन गरेर एम्बुलेन्स मगाउनु:होला, उपचारको लागि कोभिड हटलाइन ११३३,९८५१२५५४३८ र ९८५१२५५८३७ मा फोन गरेर उपचारको जानकारी लिनुहोला ।
February 20, 2021 admin समाचार 2173
महानायक राजेश हमाल उमेरले आधा शता’ब्दी नाघिसकेका छन् । विवाहको स’वालमा सधैँ चर्चामा आएका महानायक हमालले उमेर ढल्किएपछि मधुसँग विवाह गरे । अहिले भने कहिले बच्चा पाउने भनेर उनलाई धेरैले प्रश्न तेर्सा’उने गरेका छन् ।
March 14, 2021 admin समाचार 1562
लोकप्रिय अभि’नेता रमेश उप्रेतीले आज जन्मदिन परेको छ । वास्त’विक उमेरले चार दशक पार गरिस’केका यि चर्चित अभिनेनेताले अहिले पनि आफ्नो उमेर२५ वर्षको नै भन्न रुचाउँछन् । हामीसँगको कुराकानीका क्र’ममा उनले रमा’इलो शैलीमा भने, ‘उमेर
October 1, 2020 admin समाचार 7645
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (171348)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (165324)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (164767)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (164761)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (163799)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (162292)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (161882)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (160343)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (155231)
श्रीमान विदेशमा दिनरात दुःख गर्दै, यता श्रीमती आफ्नै श्रीमानको साथीसंग भागेपछि, सबैलाई रुवाउने कथा (145413)